Chikoro cheJunior | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Zvirongwa zveJuniorNakidzwa uye dzidza mutauro mutsva
BLI Inopa RUDZIKU RWAKADZIMA REMABHUKU KUVADZIDZISI VADUKUFLAP | Zvirongwa zveJunior
BLI inopa inoshamisa chirongwa chekambi panguva yematsime, zhizha, uye nguva yechando uko vese vatori vechikamu vanozove nenguva inoshamisa munzvimbo yakachengeteka uye yakachengeteka.
Kunyange zvazvo vose vanogara mumusasa vachidzidza Chirungu kana ChiFrench, vachashamwaridzana, vanoita shamwari kubva kumativi ose enyika uye vanakidzwa nemaguta akaita seMontreal, Quebec, Toronto, Niagara Falls, Ottawa nedzimwe nzvimbo dzinoshamisa muCanada.
Kuchengetedza uye hutano hwevamisasa ndiyo yedu yekutanga yepamusoro. Kupi kana kupi kwavanako vana kunogara kuri pasi pekutarisirwa uye vanogashira rutsigiro rwunodiwa kuti vagone kurarama kwakanaka kudzidza zororo rehupenyu hwavo.
Kubatana nevamwe vadzidzi vanobva pamusoro pese, ma campers achaita shamwari dzinoshamisa uye vadzidze nezve dzimwe tsika dzakawanda uku vachiita chiRungu kana chiFrench pamwechete.
Yedu Chiitiko Chekuita chirongwa chichave nechokwadi chekuti varidzi vemakamu vagadzire ndangariro dzekukoshesa kwehupenyu hwavo hwese sezvo muchisunga nekudzidza pamwechete munzvimbo yakasununguka uye inonakidza.
Zvidzidzo zvemitauro hazvina kumbobvira zvichinyanya kufadza!
Zvirongwa zveBLI Junior zvakagadzirirwa vadzidzi vadiki vane makore manomwe kusvika gumi nemaviri.
Yedu FLAP (Yekunze mutauro chiitiko chirongwa) inotora kubva pamasvondo maviri kusvika matanhatu
Zviitiko zvezuva nezuva uye mafambiro eve vhiki chikamu chehurongwa hwedu
Vashandi vedu vese vane hunyanzvi vanoona kuti vadzidzi vakachengeteka uye vanonakidzwa nekugara kwavo.
Proactively inofungidzirwa multimedia based hunyanzvi uye cross-media kukura mazano. Zvisingaoneki tarisa mhando yehungwaru rwemusoro pasina kudyidzana kwakanyanya uye kugovana zano. Holistically pontificate yakaiswa base portals mushure mekugadziriswa zvigadzirwa.
Podcasting mashandiro ekushandura mashandiro mukati mebasa rekufambiswa kuti isike hurongwa. Kutora seamless key performance zviratidzo kunze kwekusimudzira muswe murefu. Kuchengeta ziso rako pane bhora uku uchiita kudzika zvakadzika pane yekutanga-pfungwa kuti uwane kutendeuka.